Hiran’ny taona 80… : hiverina an-tsehatra ny tarika Tsimoka | NewsMada
Hiran’ny taona 80… : hiverina an-tsehatra ny tarika Tsimoka
“Mba ho any”. Hira nanamarika ny faramparan’ny taona 80 io. Azo lazaina ho “hiram-pirenena” ho an’ny tarika Tsimoka ihany koa. “ Aza avela irery aho, fa hanaraka anao…” hoy ilay tononkira hain’ny maro….
Nosafidian’ny tarika manokana mihitsy izany, mba hanamarihany ny fiverenan’izy ireo indray. Fantatra mantsy fa efa eto an-tanindrazana i Nirina, izay anisan’ny mpanorina ny tarika, ka eo am-panomanana ny fihaonana amin’ny mpankafy indray ny tarika Tsimoka.
Ho fanombohana izany, hisy ny “cabaret” izay hotontosain’ny tarika ny asabotsy 2 desambra ho avy izao, manomboka amin’ny 2 ora, etsy amin”ny Telozoro Andrefanambohijanahary.
Tsy handeha irery ny tarika Tsimoka amin’io, fa hanotrona azy ireo ireo namana indray nihira, toa an-dry Parson Jacques, Tarika Hasina ary ry Lucine Randrianina sy Tonton Pà (raha tonga ara-potoana eto an-tanindrazana, satria mbola any ivelany ny tarika Rebika).
“Hamerenan’ny tarika Tsimoka ireo hira nahafantaran’ny maro azy io. Na eto na any ivelany, maro ireo mahay ny hiran’ny tarika kanefa tsy mahalala ny mpihira. Mba hitondrana ihany koa ireo hira vaovao ny fiarahana”, hoy ny nambaran’i Hery, anisan’ny mpikarakara ny fihaonana.
Anisan’ireo hira vaovao ny “There is nothing to cry about” sy ny “Efa tsy tiana” miaraka amin’i Parson Jacques. Efa nivoaka koa ny clip “Any ianao izay”…
Raha tsiahivina, tarika nipoitra tao Antsirabe ny Tsimoka. Natsagan’i Tino, Nirina ary Babah, tany amin’ny faramparan’ny taona 80 tany izy. Efa namoaka horonampeo roa, “Izany rehefa tia” sy “Roboka” izy ireo. Samy mpamoron-kira avokoa izy telo mirahalahy, ka nahafantarana indrindra ny tarika ireo hira “Samia mamoy”, “Rehefa tia”, “Izao lazaina azy”, sns. Teo koa ny “Vangy vohitra”, na fitetezam-paritra nataon’ny tarika nanerana an’i Madagasikara, tamin’izany fotoana izany. Hantenaina fa hiverina izany, miaraka amin’ny rakikira vaovao.